Eminyakeni yamuva, ama-mods aqale ngokuqala ukusebenzisa umqondo we "slacks." Kuyini? Ziyini lezi zindwangu ezihluke ezihlotsheni zazo, yini engcono kakhulu ukuzigqoka? Sizobhekana ngokuningiliziwe ngezimpendulo zale mibuzo neminye mayelana nalokho okushiwo yilolu hlobo lokugqoka.
Kubaklami banamuhla, akuyona into entsha yokubhekana nemikhuba yeminyaka edlule futhi ivumelane nabo kumathrendi wamanje. Ama-slack ayingxenye ye-symbiosis enjalo yangesikhathi esidlule neyamanje. Kodwa kusukela ekuqalisweni kwayo, lo modeli uhlangabezane nezinombolo eziningi zokuguqulwa, futhi imakethe inezinguqulo eziningi zayo, ezihlukile kumqondo wangempela.
Izibhulu zezintambo zibukeke ekukhanyeni ema-40 ama-aes asekuqaleni kwekhulu leminyaka elidlule. Kungenxa yenhloko ye-ejensi yokukhangisa u-Edmond Haggar. Wakhela le modeli njengezingubo zokugqoka mahhala ngesikhathi sokuzilibazisa.
Izinsipho zokuqala zenziwe ngendwangu enomsoco okuthiwa "gabardine". Babenomunwe ongcolile, ingxenye engezansi ingase ihlulwe. Babenakho imicibisholo.
Igama lalezi zinwele lizositshela ngenhloso yabo. Imisipha - iyini? Ehunyushwe kusuka ngesiNgisi, leli gama lisho "ukuvilapha, ukungasebenzi, ukuvilapha".
Kungase kubonakale ukuthi lezi zibhulukwe zenzelwe ukuguqa embhedeni. Kodwa lezi akuzona amabhulukwe ezemidlalo alula , lapho sihamba khona ekhaya. Lesi sigqoko kukhona okungaphezulu.
Zakhiwe njengenguqulo eyayibuyiselwa emuva yezingubo zakudala zakudala, ngokugqoka okungenakukwenza ngaphandle kokuqinela nokuvimbela. Ngokungafani nezihlobo zabo ezizimele, ama-slack abukeka angakhathazeki, futhi nawo ungahlanganisi izinto zebhizinisi kuphela.
Ngakho-ke, i-slacks - iyini futhi ingabe ingafakwa kuphi? Izithombe zabo zanamuhla zinezinhloso eziningana. Izinketho zamadoda zidalwa ngezemidlalo futhi ngesikhathi esifanayo isitayela esihlanzekile. Zilungele ukudala izithombe ezilula nezifashini zansuku zonke.
Ukuthunga, izindwangu ezixubile ezixubile, ezifana ne-gabardines, okuvela kuwo amakhondomu okuqala, asetshenziswa. Eduze ibhande kubo kukhona amafolda akhethekile, futhi amabhulukwe ezansi asehlisiwe.
Ekuqaleni, ama-slack ayengenayo imicibisholo, kodwa ekugcineni kwafika amamodeli nabo. Ngokushesha kukhona lo mbuzo: "Amahlumela - amabhulukwe amadoda, kodwa ngegama elihlukile?". Uma kungenjalo, zihluke kanjani kumamodeli we-classical? Okwesibili kokuzivumelanisa kwazo ngokuqhathaniswa namamodeli wokuqala kunciphisa ububanzi nokubukeka kobunjwa obuncane.
Uma ngabe amamodeli okuqala adalwe ukugqoka amahora angaphandle amahhovisi, abalingani babo abaguqukile baqala ukulingana ngokuphelele nekhodi yebhizinisi yokugqoka.
Ukuze uwabize ngokuphelele ngama-classic noma, ngokuphambene, angakahleleki, kungalungile. Le ndlela yokugqoka ikhona emgumbini wezigaba zakudala kanye nomhume, ngokulinganayo kuzo zonke lezi zigaba.
Lezi zibhulukwe ekuqaleni zadalwa ngamadoda, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ama-slack abonakala nakwabesifazane. Unesisindo esifanayo futhi singasetshenziselwa ukwakha iminsalo yomgwaqo yansuku zonke, kanye nezithombe zebhizinisi.
I-Symbiosis yezinhlobo zefashini
Imisipha - iyini? Abanye bathi babukeka njengama jeans, kodwa abazenziwe nge-denim, kodwa bendwangu evamile. Abanye bathi izibhamu ezinjalo ziyizihlobo zama-chinos, kodwa ziningi kakhulu.
Kulezi zibonelo umuntu angaqonda ngokucacile indlela okuphikisana ngayo nendlela yesimanje. Ochwepheshe kuphela abanganikeza incazelo enembile yalokhu noma leyo ndlela yokugqoka.
Futhi kunombono wokuthi ukwehla kufana nezembatho ezisemthethweni kunezingubo ze-jeans nama-chinos, okuyizinkinga ukulingana nesithombe esiqinile.
Le nto, eyenziwe ekuqaleni ukuthi igqoke esimweni esingakahleleki, idluliselwe ngokuphepha ephepheni lezingubo zebhizinisi.
Ngakho-ke, i-Slacks - ikhululekile, i-stylish, i-bhantshi yehhovisi, eyokusiza kuwe cishe noma yisiphi isenzakalo sokuphila. Ngentwasahlobo, zifanelekile ngokugcwele ama-sweaters, ama-sweaters, amajackethi angakahleleki. Futhi ehlobo, zingahlanganiswa nezivinini ezihlukene, ezithandwayo noma ngokuphrinta ama-T-shirts, ama-T-shirts, noma yiziphi iziqhwa, ama-denim namahembe alula kanye nezinye izinto.
Ama-slacks, ngokungaqondile, angabizwa ngokuthi i-mast-hev yazo zonke izindlela. Ziwusizo ekudaleni izithombe ezihlukahlukene, kuzo zonke ezobukeka zihlukile.
Ezinjalo ezahlukene - kusengutsheni yoboya futhi wathungela: Ukukhetha Kids Costumes
Kanjani futhi yini ukugqoka ingubo eluhlaza?
Ubuntu Multiple. Izimpawu, izimbangela kanye lokwelatshwa.